Madaxweynaha Oo Sarkaalkii sadexaad ee Booliska u magacaabay Taliyaha Guud ee Ciidanka Booliska | Somaliland.Org
Sidaasna waxa lagu sheegay warsaxaafadeed uu caawa soo saaray Afhayeenka madaxtooyadda Cabdilaahi Maxamed Daahir waxaanu u dhignaa sidan:-
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxa uu digreeto madaxweyne oo lambarkeedu yahay JSL/M/XERM/249-1017/032012 ku magacaabay Taliyaha Ciidanka Booliska Jamhuuriyada Somaliland.
Markuu arkay: Qodobka 90aad, faqradiisa 3aad, xarafka (d) ee Dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland;
Markuu tixgeliyey: Ahmiyadda Ciidanka Boolisku u leeyihiin dhismaha Qaranka;
Markuu arkay: In baahi loo qabo buuxinta jagadda Taliyaha Ciidanka Booliska JSL;
Wuxuu go’aansaday, in Mudane Cabdillaahi Fadal Iimaan laga bilaabo taariikhda maanta [shalay] uu ahaado Taliyaha Ciidanka Booliska Jamhuuriyadda Somaliland.”
Taliye Fadal waxa uu buuxinayaa xilkii uu ka geeriyooday Taliyihii Ciidanka Booliska Marxuum- Maxamed Saqadhi Dubad oo todobaad ka hor ku geeriyooday dalka Imaaraadka Carabta.
Previous PostMadaxweyne Ku xigeenka oo xadhiga ka jaray cisbitaal weyn oo laga hirgeliyay galbeedka HargeysaNext PostWasiirka Gaashaan-dhiga Somaliland oo Ka Hadlay Dagaalo ka dhacay Sool iyo Buuhoodle	Blog